Col.Xumad oo ka hadley AMISOM
11 Jan 11, 2013 - 1:11:11 AM
Afhayeenka ciidamada nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM Col.Cali Aadan Xumad oo xalay waraysi siiyay Radio Garowe ayaa ka warbixiyay shir jaraaid uu ku qabtay Taliska xalane ee Muqdisho oo ay kaga hadlayeen waxyaabihii u qabsoomay sanadkii tagay, waxa ay qorsheysan 2013 iyo xaaladda amaan ee dalka.
Afhayeen Cali Aadan Xumad ayaa marka hore ka waramaya guulihii ay gaareen ciidamada nabad ilaalinta midowga Africa iyo kuwa DF sanadkii tagay ee 2012,isagoona sheegay inay la wareegeen gobolo badan oo ay horay ugu sugnayeen ururka Al-Shabaab.
Col. Xumad ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha ciidamada nabad ilaalinta sanadkan 2013 waxa uuna tilmaamay in qodobka ugu weyn oo ay sanadkan qorsheynayaan uu yahay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay gaarsiiyaan heer ay iyaga oo aan caawinad ka helayn ciidamo dawlada kale ka socda ay wadankooda nabadeeyaan taas oo ay ku gaari karaan in laga caawiyo tababarada iyo qalabka.
Sidoo kale afhayeenka ayaa sheegay in shirka jaraaid looga hadlay baaq uu u diray dhalinyada wili uu ku jiro fikirka ururka alshabaab ,isagoona ugu baaqay in ay ka soo laabtaan kana qeyb qaataan horumarka dalka .
Halkan ka dhagayso Siciid Axmed oo wareystey afhayeenka AMISOM